Wasaaradda cadaaladda oo booqaneysa xaruumaha booliska dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda cadaaladda Beatrice Ask ayaa Ekot u sheegtey in xukumada ay sugeyso natiijo sidaas dartedna ugu dirtey xog-hayaheeda in uu booqdo xaruumaha booliska dalka si uu ugu kuur-galo sida ay wax u socdaan. Foto: Scanpix.
Wasaaradda cadaaladda oo booqaneysa xaruumaha booliska dalka
La daabacay onsdag 21 augusti 2013 kl 10.33
Boliska Iswiidhen ayaa lagu eedeynayaa in ay ku sii liidmayaan denbi-baarista. Sannadkii hore waxaa boqolkii lix is-dhimey danbi-barista la soo gunaanadey oo dabiile lagu cadeeyey in uu geystey falkas. Sida uu qabo gudiga ka hortaga denbiyada BRÅ, hoos u dhacaan aan wanaagsaney ayaa soo socddey tan iyo 2010.
Si hadaba waxa looga qabto arimahan ayaa xog-hayaha wasaaradda caadaaladda booqasho ku tagi doonaa dhamaan xaruumaha booliska dalka, si uu ugu kuur-galo sida ay wax u socdaan. Booqashada nocaan oo kale ah ayaa horey loo sameeyey sannadkii hore , laakiin booqashadas ayaan natiijo wanaagsan keenin.
- Hadii maal dheerad ah la heley oo howlahan yahiin kuwo muhiim ah, xukumada waxey rabtaa in ay aragto natiijo wanaagsan. Ayey tiri wasiiradda cadaaladda Beatrice Ask.
Morgan Johansson xog-haya arimaha sharciga ee xisbiga Socialdemokratiga ayaa aaminsan in socdaalka wasaaradda ay ku sameyneyso dhamaan xarumaha booliska dalka in ay marqati cad u tahay guul darada xukumada ee arimaha la xiriira denbi-baarista.
- Marka aragtid in hey’ad dowladdeed ka soo baxi weydo kaalinta laga filayey markas waa in la badalaa madaxa hey’adda. Sidaas ayaa laga fili karaa xukumad. Laakiin hada waxey xukumada u direysaa sarkaaladeeda si ay wax ugu soo sheegan hey’addahan. Arintas oo kale waligey ma arag intaan xukumad ku jirey ama barlamaan ka tirsanaa, ayuu yeri Morgan Johansson.